अर्थविद्हरू भन्छन्- अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले चासो दिएन
- शिलापत्र संवाददाता | मंगलबार, चैत २२, २०७८
अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदासमेत सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरे ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले नेपालमा अर्थतन्त्रका संकेतहरू राम्रो नभएको र अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ गइरहेको बताए । ‘अर्थतन्त्रका संकेतहरू राम्रा छैनन्, गम्भीर संकटतर्फ अर्थतन्त्र जाँदैछ । त्यस कारणले पनि अहिलेदेखि नै सरकार बढी सजग भएर कतिपय नीतिहरू लिनुपर्छ,' उनले भने ।
अर्थविद्हरूले बारम्बार अर्थतन्त्र गम्भीर रहेको भन्दै सचेत गराए पनि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यसमा चासो नदिएको खनालले बताए । 'हामीले यो धेरै पहिलादेखि भन्दै आएका थियौँ । तर, सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरूले ७ प्लस प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्छौं भन्ने ढंगले उहाँहरूले प्रोपोगण्डा प्रचार गर्नुभयो,' उनले भने ।
जिम्मेवार पक्षले समेत अर्थतन्त्र सुधारमा चासो नदेखाउँदा श्रीलंकाको झल्को आएको उनले टिप्पणी गरे । 'सरकारको संवेदनशीलता देखिएन । यसले कताकता श्रीलंकाको झल्को दिन्छ,’ खनालले भने ।
त्यस्तै, अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले रेमिट्यान्स कुन गतिमा गइरहेको छ भन्ने कुराको आँकलन गर्न नै गाह्रो हुन थालेको टिप्पणी गरे ।
'पछिल्लो महिनाको कुरा गर्ने हो भने रेमिट्यान्स ७१/७२ अर्ब मात्रै थियो एक महिनामा । आजको मितिमा अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई दिएको सूचनाअनुसार ९१ अर्ब रेमिट्यान्स एक महिनामा आयो भनेर भनिएको छ,' उनले भने, 'यो महिनैपिच्छे जाने हो भने यति उतारचढावहरू देखिन्छ, कुन प्रवृत्तिमा यो गइरहेको छ भनेर आकलन गर्नलाई धेरै गाह्रो छ ।'
अहिले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नभइरहेको भन्दै प्याकुरेलले यी तीनै अंग एकै ठाउँमा उभिएर अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 'योजना आयोग एकातिर छ, राष्ट्र बैंक एकातिर छ, अर्थ मन्त्रालय एकातिर छ,' उनले भने ।
नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूमा परिवारवादलाई छोड्न नसकेकाले सानो भ्रष्टाचार मात्रै बाहिर आउने गरेको उनले बताए । ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको सुनुवाइ नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ फ्रिज भइरहेको प्याकुरेलको टिप्पणी थियो ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपाल परनिर्भर हुँदा यसको गम्भीर संकट देखिएको बताए । भोलि नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न कठिन भइसकेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि धेरै अनिश्चितता आइसकेको भन्दै यसको अग्र पङ्क्तिमा श्रीलंका देखा परेको अधिकारीको टिप्पणी थियो ।
'विश्वको अर्थतन्त्रमा अहिले आईएमएफको चिफकै कुरा मात्र होइन, कसैले पनि भोलि ठ्याक्कै यसो हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्न सक्ने, अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन,' अधिकारीले भने, 'त्यति अनिश्चितता आइसकेको हुनाले अब त्यसको प्रभाव विश्वमै पर्छ । त्यसको फ्रन्ट लाइनमा श्रीलंका देखिएको छ ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २२, २०७८, १९:३६:००